Nyeredzi: 4 varume vane ngozi zvikuru vezodhiyasi - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
HOME » MAZANO »Kuongorora nyeredzi: 4 varume vane njodzi dzezdiacac varume - SANTE PLUS MAG
Nyeredzi: 4 varume vanonyanya kukura vezdiacac - SANTE PLUS MAG
kugashira / Psycho & Sexuality / Psychology / Kuvandudza wega /
Nyeredzi: 4 varume vane ngozi zvikuru vezodhiyasi
Kusatendeseka kunoreva zvinhu zvakawanda uye zvinogona kutorwa zvakasiyana. Kune vamwe, kuva vasina kutendeka kunoreva kungoita zvepabonde zvekare. Nokuti vamwe, pane kusavimbika kana mumwe anonzwa ane kungonzwa mumwe munhu kana zvokufungidzira pamusoro mumwe. Zvisinei, kana tiri kutaura pamusoro kusavimbika, kazhinji isu kupomera munhu aidaro tisakanganwe kuti kuita upombwe, zvinotora maviri. Muchikamu chino, tsvaga 4 inonyanya kuipa kunyengedza varume vanodikanwa.
Pour la personne uyo anobiridzira, kusavimbika kunofadza uye kunokurudzira, kunopa manzwiro ekuvandudzwa, mufaro uye kutambira. Kana ari munhu akatengesa, kazhinji ane pfungwa yokuti nyika yake iri kuparadzana, uye kuti mhepo yose yakadzingwa kunze kwemukati. Asi chii chinotungamirira mukugadzikana kwakadaro?
Maererano nerimwe kudzidza yakabudiswa mu Zvinyorwa zveBonde RokutsvagaKune zvikonzero zvinomwe zvinokonzera kuti vanhu vasatendeseka. Zvechokwadi, vanotsvakurudza US akaongorora vakuru vakwegura 495 20 makore paavhareji, kuti vakabvunza kana vakanga nokusingaperi chandakukanganisira dzavo shamwari uye, kana zvakadaro, sei.
7 zvikonzero zvokunyengera
1) Kana pasina rudo
Mushure mokuongorora mhinduro, vatsvakurudzi vakagumisa kuti chikonzero chikuru chevatori vechikamu vakanga vasina kutendeseka ndechokuti vakanga vasisati vava kuda mubatsiri.
2) Kana vasingakwanisi kugadzirisa kugadzirisa munhu mumwe chete wepabonde
Zvichida tsika dzedu dzokubereka dzinofanana nemhuka pane zvatinofunga. Chikonzero chechipiri chekunyengedza ndechekuti vanhu vanosarudza "zvakasiyana-siyana zvevamwe".
3) Pavanenge vachitambudzika kupindira
Vatsvakurudzi vanoti 41% yevanhu vakapindura vakati vakanyengedza pane avo vaaifambidzana navo nokuti vakanga vasina kunzwa zvakanyanya kufanana naye.
4) Kana vasina kunyatsoziva
Kunyange zvazvo chikonzero kuti "Ini kunwa yakawandisa" sokuti kuva dzechokwadi chaizvo achimisa, asi ndiko chepamutemo pokuvawanira 70% yevanhu kutendeka.
5) Kana vachida kufadza
57% yevanhu vakapindura vakatsanangura kusachengeteka kwavo sechikonzero chekubiridzira.
6) Pavanenge vakatsamwa
Hongu, dzimwe nguva, kusatendeseka kunogona kungova chiito chekufungidzira pavanenge vakatsamwira nemumwe wavo. Zvechokwadi, 43% yevaya vakabvunzurudzwa vakati havana kutendeseka mushure mekukakavadzana.
7) Nokuda kwepabonde
Vanenge chikamu chetatu chevatori vechikamu vakataura kuti vakanga vasina kutendeka nekuda kwekuti vaida. Kuziva kuti vazhinji vevaya vaifarira zvepabonde sekutungamira vaiva varume.
4 ndiyo inonyanya kuipa yezindidiac murume murume mbavha
Vagari vomumhuri, tinowanzonzwa nezvadzo, asi isu hatikwanise kuidzikisa. izvi vakadzi zvinotyisa. Asi ndiani chaizvoizvo? Uye vanoita sei?
1) Mutsva: Muvhimi
Aries vakadzi vakadzi vechokwadi vechokwadi. Rutivi rwavo rwomusango harusiyi varume vasina hanya. Izvi zvinokonzera kukwanisa kupinda mumanzwiro evanhu uye kuvashandura muchokwadi. Chero chipi nechipi munhu anodikanwa pachivande, Amazons aya emazuva ano anokwanisa kugadzirisa zvose zvido zvavo uye zvido zvavo. Hapana anokwanisa kuzvirwisa!
2) Taurus: The seductress
Taurus vakadzi vanomiririra simba pamwe chete nepfungwa dzakanyanya. Vanoziva kushandisa masimba avo ose kufadza munhu. Inokosha mafuta, chipfeko chechi-sexy ... Vanoita kuti murume waanogara naye kwekanguva yemufaro mukuru. Vakadzi ava vakanaka uye vanoziva nzira yekuvandudza ivo pachavo. Saka ivo vanoonekwa sevanopikisa kune vamwe vakadzi vose.
3) Kuenzanisa: muunganidzi
Kubata kwekutendeseka chinhu chakavanzika chaicho chevanhu veRibra. Vari kufadza, vakangwara, vanoda kuziva, vane shungu uye vanoziva nzira yekuisa munhu nyore nyore pavanenge vari muboka ravo. Vane chipo chokuwana kutarisa kwevanhu kuitira kuti vaone maziso avo chete. Mukuda nezvinhu zvakanaka, vanoda kufarira uye kuunganidza varume. Zviri nyore kurarama, zvinomiririra rudzi rwekupukunyuka kukunda kwavo uye kuvabvumira kukanganwa kushungurudzika kwavo kwose.
4) Scorpion: The woman fatale
Vakadzi ava havana chokwadi kuti ivo vanovhiringidza vanhu vane njodzi dzezhiacac. Vasina kuchenjera, pavanosarudza kuva nemurume, vanoshandisa zvose zvavanoda kana akabatanidzwa kana kwete. Vanoshandisa miviri yavo kuti vanyengerwe uye vanoziva nzira yekushandura kuva vakadzi vane sulphurous vane mwoyo unofadza. Varume vanoda uye havagoni kuramba!
Zodiac: izvi ndizvo zvinokumirira musi weMugovera 18 May 2019 maererano nechiratidzo chako cheredzi - SANTE PLUS MAG